Fanaanad Caan Ah Oo Mogdisho Tagtey.
29 July, 2011 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Fannaanad caan ah oo u dhalatay dalka Mareykanka, laguna magacaabo Mama Soul ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho, iyadoo kulan la yeelatay ra’isul wasaaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Fannaanad caan ah oo u dhalatay dalka Mareykanka, laguna magacaabo Mama Soul ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho, iyadoo kulan la yeelatay ra’isul wasaaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali. Fannaanada ayaa booqatay xeryo ay ku nool yihiin dadka ku barakacay Muqdisho, halkaasi oo ay ku soo aragtay dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ay ka muuqato macluul, waxayna sheegtay in ay telefishinka ka daawan jirtay oo keliya, balse ay dhaayaheeda ku aragtay dad ay duruuf abaareed haysato.
Mama Soul ayaa horay u soo martay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, oo ay ku soo aragtay qaxooti badan oo tabaaleysan, kuwaasoo ay sheegtay in ay u baahan yihiin gargaar.
Fannaanada ayaa iyadoo ilmayneysa ka codsaday beesha caalamka in gurmad lala soo gaaro dadka ku barakacay abaaraha Soomaaliya, iyadoo sheegay in aysan fahmi karin sababta caalamku u daawanayo musiibada ka jirta Soomaaliya.
Wadaad caan ka ahaa Pakistan oo la dilay
Kooxo hubeysan oo dilay Nin Caanka ah Magalada Marka!!
Fannaanad Caana oo ku geeriyootay Muqdisho!!
Wariye Caana oo lagu dilay Gaalkacyo
Ganacsade Caana oo lagu dilay Kismaayo iyo Xiisad ka taagan!!
Jen. Caanood oo ka hadlay warka sheegaya in uu goostay!
Ciidamadii uu watay Gen. Caanood oo inta badan la wareegay degmada Marko!
Gen:Caanood oo la gosytay ciidamo iyo gawaari Farmaajo W/Gaashandhigga ku ilaalin jiray?
Yaa ka danbeeya Dilalka Muqdisho Shaqaalaha Shirkadda Hormuud loogu geesto Xog! Visits: 0
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo loo qeybin doono laalush ,XOG CULUS! Visits: 11
Burco: Xafladaha ragga iyo dumarka oo la mamnuucay !! Visits: 14
Rag lagu Eedeeyey Daacish Iyo Al-Shabaab oo xukun lagu Riday!! Visits: 22
Dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo ka socda Beledweyne!! Visits: 32